Itekhnoloji yeNtengiso: Ngaba ziyafana?
NgoLwesine, uJanuwari 28, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngaba kufuneka ube ngu iteknoloji ingcali ukuba yinkokeli kwi Marketing? Ukuthengisa kunye netekhnoloji kubonakala ngathi ziye zahlangana kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo.
Nababhali bekopi kufuneka baqonde indlela abantu abafunda ngayo amaphepha-ukwenza uvavanyo lwe-A / B, ukuqonda ukusetyenziswa kwendawo emhlophe, kunye nokujonga iimephu zobushushu. Abaphathi beBrand basasaza izikhokelo zokufaka uphawu ezenziwa ngobubanzi beepikseli, imibala efanelekileyo kunye namagama adibeneyo kwi-brand… konke kuvavanywa kwaye kwaqinisekiswa ngetekhnoloji. Abathengisi ngqo kufuneka baqonde ukuprintwa okunamandla kunye nentengiso yedatha.
Le yimizekelo nje embalwa, kodwa kuyandonwabisa into yokuba uSekela Mongameli weNtengiso kwihlabathi lanamhlanje kufuneka ahambelane ngakumbi namandla kunye nengxelo yeengxelo ezikhoyo ngetekhnoloji kunakwiminyaka emininzi eyadlulayo.
Ndikhumbula ndingena kwi-ofisi ye-VP kanye xa ndandisebenza kwiphephandaba kwaye bathi, "Yinto eyenziwayo eyenziwa nguMphathi weNtengiso weDatabase?" Kwakuneminyaka eyi-10 edlulileyo kwaye ndothuka kakhulu! Kukho konke ukunyaniseka, loo mntu wayiqonda indibaniselwano yamagama, ikopi yokubhala kunye nokuyilwa kwephepha… ayikho enye into. Khange bahlale ixesha elide…
Ngelixa iinkampani ezininzi zikhula kwaye umsebenzi ufakwa kwingcaciso engakumbi, inkokeli yentengiso iye yanda. Nokuba ulawulo lwewebhu kufuneka uqonde enjini yokukhangela noun, ukuthengiswa kweinjini yokukhangela, uyilo, Ukufaka uphawu, ukuguqulwa kokusebenza, ikopi yokubhala, A uvavanyo / B, kubahlalutyi, imephu yobushushu… Ukubala ezimbalwa!
Ngaba uyinkokeli yentengiso engaxhomekeki kubuchwephesha? Ndingathanda ukuva iimpikiswano malunga noku. Andikholelwa ukuba inkokeli yentengiso kufuneka ibazi ubuchule obuhle bezi teknoloji nokuba zingaziphumeza njani… banezixhobo zokwenza oko. Nangona kunjalo, ukuqonda iitekhnoloji kubonakala kufanelekile kwincwadi yam.
tags: amanqaku ekloutUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiWordPress
Jan 28, 2010 kwi-11: 45 AM
Ukuba awusebenzisi itekhnoloji kuThengiso ungasemva kwaye uphulukana nokusebenza ngempumelelo kunye nethuba! Ukuze ukuthengisa kusebenze ngokunyanisekileyo, KUFANELE iteknoloji elinganayo ukuqhuba iziphumo. Iisenti zam ezimbini….
Jan 28, 2010 ngo-2: 53 PM
Awuyi kundiva ndiphikisa ngokuchasene nokuqonda nokwamkela itekhnoloji. Ngokuchasene noko. Kuyimfuneko ukuqonda itekhnoloji kwaye zizicelo ezongezelelekileyo kuyo yonke into oyenzayo njengomthengisi. Ukuba intloko yentengiso kunye nentloko ye-IT ayinakuthetha ulwimi olufanayo amathuba okuphumelela aya kuba mbalwa phakathi. .
Jan 28, 2010 ngo-3: 26 PM
Ndiyavumelana ngokuqinisekileyo nawe, uDouglas. UMark W. Schaefer ushiye le ngxelo kwiposti yam ebizwa ngokuba yi "Darwinism & Social Media".
Namhlanje, isantya sotshintsho siya kuchaza izizwe, abantu kunye nempumelelo yomntu ngamnye. Yindaleko entsha. Ixesha elizayo ayililo elona linamandla kodwa lelokulungelelanisa kakhulu, abo banokubona ukuba bangalusebenzisa njani utshintsho kwezobuchwephesha ukuze bafumane ukhuphiswano ”.
Jan 29, 2010 kwi-11: 15 AM
Abathengisi kufuneka baqonde amandla etekhnoloji ahambisa umyalezo wabo. Kodwa ngokunyanisekileyo, kufuneka sihlale sinobuchwephesha bobuchwephesha: singatshatanga nakowuphi na umntu, sizimisele ukusebenzisa oko kusidibanisa apho bakhoyo abathengi bethu namhlanje.